Reinfeldt oo soo dhoweeyay dhamaashaha waqtiga Qadaafi. - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Muammar Kadaffi oo la sheegay in uu dhintay.Sawirle:Pier Paolo Cito/Scanpix.
Wararka Dhimashada Qadaafi
Reinfeldt oo soo dhoweeyay dhamaashaha waqtiga Qadaafi.
La daabacay torsdag 20 oktober 2011 kl 16.42
Ra’iisal wasaaraha dalka Iswiidhan Fredrik Reinfeldt ayaa soo dhoweeyay dhaamashaha waqtiga hoggaamiyihii hore ee dalka Liibiya Mucamar Qadaafi oo markii dambe u geeriyooday dhaawac soo gaaray xilli maalintii shalay ay ku qabteen ciidamadda golaha ku meel gaarka ee dalkaasi dagaal qaraar oo ka dhacay magaaladda Sirte.
”Waqti yar ka hor bay aheyd markii Qadaafi uu ku maamulayay Liibiya awood militeri uuna qarka u saarnaa in uu xasuuq ka fuliyo magaaladda Bengazi, hadda waa ay uu tegay awoodiisana waa ay bur burtay” ayuu yiri Reinfeldt oo jawaab ka bixinayay warka qabashada iyo geerida Qadaafi.
“Soo qabashada Qadaafi, dhismaha Liibiyada cusub ayaa dhabtii bilaaban karta. Liibiyada cusub waxay u baahntahay kaalmadeena oo wadata dadaal gargaar sida qeybta caafimaadka, dhisda ururada bulshada iyo xaquuuqda dimoqraadiyada tanina waxaan rajeynayaa in ay gacan ka geysan karto dhismaha duni carab oo cusub iyo waqooyiga Afrika oo cusub,” ayuu hadalkiisa ku sii daray ra’iisal wasaare Reinfeldt.
Nin ka tirsan kooxaha mucaaradka Liibiya oo ku nool Iswiidhan lana yiraahdo Shaban Elgale ayaa ku yiri wakaaladda wararka ee TT "Liibiya waa ay ka xarowday Qdaafi iyo taliskiisa, waa farxad weyn afartan iyo labo sano ka dib xor baynu noqonay.